Ungalilungisa Kanjani Iphutha Lokudlala le-YouTube? - Ungakwenza Kanjani
I-YouTube yindawo eyodwa yomphakathi ethola ukuthandwa usuku nosuku. Kuze kube manje, ingesinye seziteshi ezithandwa kakhulu zokusakazwa kwevidiyo phakathi kwabasebenzisi. Yize ubuchwepheshe bokudlala kwe-YouTube bungaphelele kangako njengoba bekulindelwe.Abantu abaningi bakhononde ngesici sokudlala ngenkathi basebenzisa i-youtube kumaselula abo nakwiwebhu. Inikeza ngokoqobo isipiliyoni sabantu abafake imali kubabhalisile be-premium ye-YouTube.
Kunezizathu eziningi kakhulu ezingabhekwa ngemuva kwephutha ekudlaleni. Lokhu kungahlotshaniswa ne-Akhawunti yakho ye-Google., Isilondolozi Sesikhashana, noma uhlelo lokusebenza lwe-buggy kusistimu yakho.Kule ndatshana, sizokhuluma ngezindlela ezi-10 eziphezulu izingqinamba zokudlala ze-YouTube ezingaxazululwa ngazo. Ngakho-ke, hamba ngalezi zinyathelo futhi ujabulele i-YouTube yakho ngokugcwele.
Uma ungumfundi ungakwazi Faka isicelo se-YouTube Premium Student Discount .
Lungisa Iphutha Lokudlala le-YouTube - Zonke Izindlela Ezingenzeka
1. Vala uphinde uvule amathebhu wesiphequluli
Kushiwo ukuthi ukuvala nokuvula kabusha ithebhu ye-YouTube kusebenza ezingeni elilandelayo. Kulula njengoba kuzwakala. Ukuphela kwento okufanele uyenze ukuphuma kuthebhu ye-YouTube yakamuva ngezinkinobho zesinqamuleli okuyi-Ctrl / Command + W nokuvula kabusha ithebhu usebenzisa okhiye besinqamuleli Ctrl + Shift + T okhiye wewindi.
Uma ungumsebenzisi we-Mac bese usebenzisa okhiye bezinqamuleli Command + Shift + T.Uma udlala i-YouTube ku-smartphone yakho bese umane ubuyele esikrinini sasekhaya, susa lonke uhlelo lokusebenza kusuka kwimisebenzi eminingi bese uyivula kabusha ngokusebenzisa ukuqala. Bheka ku-YouTube ukuthi leli qhinga lisebenzile noma cha.
2. Phuma ngemvume bese Ungena ngemvume ku-Google
Enye into ongayenza ukuqala uye kuwebhu ye-YouTube bese uchofoza isithombe sephrofayela ekhoneni eliphezulu kwesokudla bese uphuma lapho usayine i-Akhawunti yakho ye-Google yakamuva.
Ngemuva kwezikhathi ezithile ngena futhi ngokusebenzisa ukugunyazwa okufanayo kwe-google bese udlala ividiyo ye-YouTube
3. Setha kabusha umzila
I-router ngokuyisisekelo ibhokisi elilula lepulasitiki njenge-mini-computer lapho kufakwa khona i-CPU, imemori, kanye nokugcinwa kwendawo okusebenza ohlelweni olusebenzayo. Ngakho-ke, njengoba wenza ngekhompyutha yakho nama-smartphones ungaphinda uqalise kabusha i-router yakho ukuxazulula zonke izingqinamba zakho.
Kuyaziwa ukuthi kufanele ulinde okungenani amasekhondi ayi-10 ngemuva kokucima i-router bese uqala kabusha ngokuqiniseka ukuthi i-capacitor isikhathele ngokuphelele.Ngemuva kokuthi uqale kabusha i-router yakho bese uxhuma i-YouTube yakho ukuze ube nemiphumela emihle.
4. Buyekeza i-Router Firmware
Ngokwesitatimende sabasebenzisi abaningi ungazama iqhinga lapho ungabuyekeza khona i-router firmware yakho engasebenza. Ngakho-ke, le nqubo ifanele ukuyifunela.
Uma ufuna imininingwane eminingi ngokuvuselela i-firmware ye-router nokuthi ungayibuyekeza kanjani ungabheka imodeli yemodemu ngezinkomba ezinemininingwane ezivela kuwebhusayithi yomthengisi we-router.
5. Sula Amakhukhi Nenqolobane
Kuhlala kubalulekile ukususa amafayela wesikhashana futhi angathandeki kunoma iyiphi idivayisi oyisebenzisayo. Kuyasiza ukuthi izinsiza zokusakaza ziqhubeke njalo.
Udinga ukusula yonke inqolobane, umlando wamakhukhi kanye namafayela we-inthanethi wesikhashana kusiphequluli sakho sedivayisi. Uma i-YouTube yakho ingasebenzi ngisho nangemva kwalokho yiya kwelinye izinga elingu-Brower.
6. Shintsha isiphequluli
Ekugcineni i-YouTube ingumkhiqizo weGoogle ngakho-ke uma uzama ukusebenzisa i-YouTube kusiphequluli se-Google Chrome izosebenza kahle kakhulu. Isibonelo, bekucatshangwa ukuthi i-YouTube izosebenza kahle ku-Opera, Firefox, Edge, noma ku-Safari kepha i-Google iyona i-YouTube ezosebenza ngayo ngaphandle kwezithiyo njengoba i-Google inenkambiso yokuyigqekeza ibe yisiphequluli esisebenzisana nayo ukuze isebenze ngokungafanele Ukudlalwa kwe-YouTube.
Esikhathini esedlule, bekunezinsolo eziningi maqondana ne-google ngokushintsha isiza sayo sibe isiphequluli esiphukile esingeyona i-chromium kepha i-google chrome iqinisa inkinga yokudlalwa kwe-YouTube.
7. Khubaza i-Adblock Extension
Njengamanje, kube nephutha lokudlala le-YouTube elenziwe isandiso se-AdBlock's Popular Chrome seMicrosoft Edge Brave ngisho nesiphequluli se-Chrome. Ngemuva kokuhlola konke okwenzekile, iMicrosoft inikeze izindaba eziqinisekisiwe ukuthi kwenzeke ngenxa yokungqubuzana phakathi kwesandiso se-AdBlock Plus Browser ne-Microsoft edge okuthinte ukulayishwa kwamavidiyo we-YouTube.
Kungcono ukugwema izandiso ezinjalo ze-chromium ukuxazulula inkinga.
8. Buyekeza i-Youtube App
Lokhu kungahlotshaniswa nama-Smartphones akho. Iphutha lingabangelwa inqola ekhishwe i-Google. Uma ubeka izingcingo zakho eziphathwayo kuzibuyekezo ezizenzakalelayo zezinhlelo zokusebenza i-YouTube yakho izobuyekezwa njalo lapho ifuna ukuvuselelwa.
Kepha kulokhu i-google ayikhethi ngokwanele futhi ixazulula inkinga ngokushesha.Udinga nje kuphela ukuya ku-google play store bese uthola inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lwe-YouTube.
9. Lungisa ikhwalithi yevidiyo
Ungajabulela ukulungiswa okungafika ku-4k ku-YouTube yakho ngamavidiyo okusakaza. Ungayisetha futhi ku-auto ukulungisa ividiyo yokusakaza ngokuya ngokutholakala kokuxhuma kwe-inthanethi Uma uzibekela isisombululo sevidiyo wedwa futhi awunawo umkhawulokudonsa omningi we-inthanethi waleyo vidiyo yokusakaza izokhombisa iphutha lokudlala ngesikhathi sokulayisha.Kunconywa ukunciphisa ukulungiswa kokudlala ividiyo bese uzama ukulungisa inkinga.
10. Bheka i-Google Servers
Imbangela enkulu yephutha lokudlala le-YouTube kungaba ukuhlukumezeka kweseva ye-google. Ukuthola eminye imininingwane iya ku- umtshina phansi futhi uhlole izinkinga ezifanayo. Uma lokhu kuyinkinga enkulu lapho-ke ukulungele ukulinda isikhashana, iGoogle ize ilungise lonke iphutha.
I-Youtube isibe enye yezinsizakalo ezibaluleke kakhulu kumuntu ngamunye. Inkinga yokudlalwa kwe-youtube ingaba ngomunye umthombo noma ngabe ivela kuwebhu noma kuselula. Isixazululo sesivele sixoxwe ngenhla ngazo zonke izinkinga ezihlobene nokudlalwa kwe-youtube. Zama zonke izinyathelo futhi usazise ukuthi bekuyini inkinga yephutha lokudlala le-youtube nokuthi yini oyithathile ukuyixazulula.
Ngifuna ukuya ku-netflix
ungayibonisa kanjani ingxoxo ngokushwiba
ungawuthola kanjani umdlalo wamahhala
i-roblox ukuthi ungayihlola kanjani i-fps
ama-movie wokulanda mahhala